XILDHIBAANDA BAARLAMAANKA SOOMAALIYA OO ANSIXIYEY DHISMAHA GUDIYADA | stn radio	Wednesday, November 26th, 2014	Home
XILDHIBAANDA BAARLAMAANKA SOOMAALIYA OO ANSIXIYEY DHISMAHA GUDIYADA
Jan 2, 2013 - Aragtiyood	Kulankii koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya kalfadhigiisa koowaad ayay mudanayaasha Xildhibaannada Soomaaliya Arbacada maanta ah kaga doodeen guddiyada 15-ka ah oo uu yeelanayo baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka baarlamaanka waxaa maanta gudoominayay gudoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka, mudane Mahad Cabdalla Cawad, waxaana ka soo qeyb galay 176-mudane, iyagoo dood xasaasi ah ka yeeshay guddiyada baarlamaanka iyo sida loo dhisi karo.
Guddiyadda manta la dhisay waxaa loo kala qaaday heerarka xukuumadda waxaana la dhisay guddiga difaaca, guddiga maaliyadda, guddiga arrimaha gudaha, waxaana dhamaan guddiyadu ay si gaar ah u la shaqeynayaan xukuumadda Soomaaliya.
Guddiyada waxaa sidoo kale ku jira, guddiyo si gaar ah u la shaqqeynaya wasaaradda adeegga bulshada xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana ay ka soo horjeestay mudanyaal fara ku tiris ah ee mucaariday guddiga.
Xildhibaan Maxamuud Axmed Kula lihi, oo kamid ah mudanayaasha mucaariday guddiyadda la dhisayo ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in magaciisa lagu soo daro isagoo sheegay in magaciisa uusan guddiyada ku jirin.
Radio STN Xafiiska Muqdisho.